Magaala Naqamtee keessatti hojjetaan mootummaa tokko rasaasaan dhahame - BBC News Afaan Oromoo
Sosochiin kenninsa tajaajila magaala Naqamtee har'aa fi kaleessa cufaa ture jedhan Itti Gaafatamaan Qajeelcha Poolisii magaala Naqamtee KomaaNder Girmaa Abdiisaa.
Rakkoo nageenyaa Lixa Oromiyaatti mul'ataa ture furuuf mootummaan gidduu kana humna waraanaa gara magaalotaa fi godinaalee wallaggaatti bobbaasuu himeera.
Kanaan wal qabatees yaaddoon nageenyaa magaalota tokko tokko keessatti uumameera.
Komaander Girmaan sababa maaliin akka tahe hanga ammaatti adda bahuu baatus sochiin magaalicha keessa jiru guutummaatti cufamuu BBCtti himaniiru.
Kun lagannaa gabaati moo yaaddoo nageenyaa magaalicha keessa jiru dha gaaffii jedhuufis, ''Ajandaan isaa maal akka tahe hin beeknu garuu cufaadha,'' jedhan Komander Girmaan.
Suuqota dabalatee hoteelonni tajaajila kennanis akkasuma cufaadha kan jedhan Komaander Girmaan Bulchiinsi magaalaa rakkoo kana furuuf jaarsolii biyyaa waliin mari'achaa jira jedhan.
Jaarroleen jaarsummaaf gara Lixa Oromiyaa imalan akkamiin deebi'an?
Magaala Naqamtee keessa haala isaa adda baafachuu baannus darbee darbee dhukaasni jira jedhanii, Raayyaan Ittisa Biyyaa bakkee irraa nutti dhukaasamnaan deebii kennine jedhanii nutti himan jechuun komaander Girmaan BBCtti himaniiru.
'Qaamni bakkee irraa Raayyaa Ittisa Biyyaa irratti dhukaase eenyu kan jedhuu fi meeshaa akkamii dhukaasaa akka turan waan adda baafanne hin qabnu sagaleedhuma dhukaasaa dhageenye malee, jedhan Komaanderichi.
Hojjetaan Waajjira Bulchiinsaa fi Nageenyaa aanaa tokko magaala Naqamtee keessatti rukutamee hospitaala galuus Komaander Girmaan BBCtti himaniru.
Hojjetaa Waajira Nageenyaa kana eenyutu rukute kan jedhuu waanti barame hin jirus jedhan.
Magaala Naqamtee keessatti yeroo garaagaraatti maqaa Abbaa Torbee jedhamuun namootni garaagaraa ajjeefamaa turaniiru.
Mootummaan Abbaan Torbee qaama ABOti jedhee ibsus ABO'n gama isaan caasaa fi qaama qabsoo bifa kanaan deemu hin qabnu jechuun BBCtti himeera.
Xiyyaarri magaala Naqamtee yeroo buutuu fi dhukkeen dirreerraa olka'u agarsiisu karaa miidiyaa hawwaasaa qoodamaa ture keessummaa fiddee dhufun nama barbaaddu ammoo fudhattee deemte malee dhimma biraaf miti jedhan.
Mootummaan hidhattotni ABO karaa nagaa hiikkachuun gara qaama nageenyaatti makamuuf eeyyamamoo miti, dabalataan qaama nageenyaa mootummaa irrattis dhukaasa banu jechuun komata.
ABO'n ammoo akkaataa waliigaltee keenyaatti kan deemaa hin jirree fi haamilee jalqabaan kan hojjechaa hin jirre mootummaadha jechuun deebii kennee ture.
Wal gaareffannaan paartilee lameen gidduu jiru ammoo gidduutti nageenya uummataa miidhuu waan danda'uuf karaa nagaa xumuramuu akka qabu jiraattotni magaalota garaagaraa dubbataa turaniiru.
Kaleessa Ministirri Muummee magaala Ambootti barattoota waliin yeroo mari'atan illee yaduma kana kaasaafii turan.
Nageenya Lixa Oromiyaa: Jaarroleen jaarsummaaf gara Lixa Oromiyaa imalan akkamiin deebi'an?